Bunjani Ubudlelwane Bakho NoNkulunkulu? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Kukho konke okwenzayo, kumele uhlole ukuthi zilungile yini izinhloso zakho. Uma ukwazi ukwenza ngokuhambisana nezimfuno zikaNkulunkulu, kusho ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile. Lesi yisikali okuqalwa kuso. Bheka izinhloso zakho, futhi uma uthola ukuthi sekuvele izinhloso ezingalungile, kufanele ukwazi ukuzifulathela wenze okuhambisana namazwi kaNkulunkulu; ngalokhu uyoba umuntu olungile phambi kukaNkulunkulu, okuveza ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile, nokuthi konke okwenzayo kungenxa kaNkulunkulu, hhayi ngenxa yakho. Kukho konke okwenzayo nokushoyo, kumele ulungise inhliziyo yakho, ube olungile ezenzweni zakho, futhi ungaholwa yimizwa yakho, noma wenze intando yakho. Lezi yizimiso okufanele amakholwa kaNkulunkulu aziphathe ngazo. Izinto ezincane zingembula izinhloso zomuntu, ngakho, ukuze abantu bangene endleleni yokupheleliswa uNkulunkulu, kumele baqale balungise izinhloso zabo nobudlelwane babo noNkulunkulu. Kulapho ubudlelwane bakho noNkulunkulu buvamile kuphela lapho uyokwazi khona ukupheleliswa Nguye; kulapho kuphela ukusetshenzwa, ukuthenwa, ukuqoqwa, nokucwenga uNkulunkulu kuyothola khona umphumela obuhlosiwe. Lokho kusho ukuthi, uma abantu sebekwazi ukugcina uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, futhi bengafuni ukuzizuzela noma bacabange ngekusasa labo (ngokwenyama), kodwa kunalokho bathwale umthwalo wokungena ekuphileni, benze okusemandleni ukufuna iqiniso, futhi bahobele umsebenzi kaNkulunkulu—uma ungenza lokhu, khona-ke imigomo oyifunayo izoba elungile, futhi ubudlelwane bakho noNkulunkulu buzoba ngobujwayelekile. Ukulungisa ubudlelwane bomuntu noNkulunkulu kungabizwa ngokuthi kuyigxathu lokuqala ekungeneni ohambeni lomuntu lokomoya. Nakuba ikusasa lomuntu lisezandleni zikaNkulunkulu, futhi linqunywe ngaphambili uNkulunkulu, futhi ngeke liguqulwe umuntu, ukuthi ungapheleliswa yini uNkulunkulu noma uzuzwe Nguye kuncike ekutheni bujwayelekile yini ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Mhlawumbe kunezingxenye zakho ezibuthakathaka noma ezingalaleli—kodwa uma nje umbono wakho nezinhloso zakho kulungile, uma nje ubudlelwane bakho noNkulunkulu bulungile futhi bujwayelekile khona-ke uyoba ngofanele ukupheleliswa uNkulunkulu. Uma ungenabo ubudlelwane obuhle noNkulunkulu, futhi wenza ngenxa yenyama, noma yomndeni wakho, khona-ke noma ungasebenza kanzima kangakanani kuyoba ukusebenzela ize. Uma ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile, yonke into iyohlangana. UNkulunkulu akabheki okunye, kodwa ubheka kuphela ukuthi imibono yakho ekukholweni kuNkulunkulu ilungile yini: ubani okholwa kuye, ukholwa ngenxa kabani, nokuthi kungani ukholwa. Uma ukwazi ukuzibona kahle lezi zinto, futhi wenze izinto unemibono evulelekile, khona-ke ukuthuthuka kwakho kuyoqhubekela phambili futhi uyoqiniseka ngokungena emgudwini ofanele. Uma ubudlelwane bakho noNkulunkulu bungajwayelekile, nemibono yakho ekukholweni kuNkulunkulu kungaqondile, lokhu kuyize, futhi noma ungakholwa kanjani kuNkulunkulu, ngeke uzuze lutho. Kulapho ubudlelwane bakho noNkulunkulu sebujwayelekile lapho uNkulunkulu eyokuncoma khona, lapho ufulathela inyama, uthandaza, uhlupheka, ubekezela, ulalela, usiza abafowethu nodadewethu, uzikhandlela uNkulunkulu, njalo njalo. Ukuthi into oyenzayo ibalulekile noma cha kuncike ekutheni izinhloso zakho zilungile yini nasekutheni imibono yakho ilungile yini. Ezinsukwini zanamuhla, abantu abaningi bakholwa kuNkulunkulu sengathi batshekisa amakhanda bebuka iwashi—imibono yabo itshekile futhi kufanele iqondiswe ngesixazululo ebesingalindelekile. Uma inkinga ixazululwa, yonke into izolunga; uma kungenjalo, konke kuyoba yize. Abanye abantu baziphatha kahle phambi Kwami, kodwa esithe konke abakwenzayo ukungiphika. Lokhu kubonakalisa ubugebengu nokukhohlisa, futhi lolu hlobo lomuntu luyinceku kaSathane; luwumfanekiso kaSathane oze ukuzovivinya uNkulunkulu. Wena uwumuntu olungile kuphela uma ukwazi ukuthobela umsebenzi Wami namazwi Ami. Uma nje usakwazi ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu; uma nje konke okwenzayo kwamukeleka phambi kukaNkulunkulu futhi uziphatha ngobulungiswa nokuhlonipheka kukho konke okwenzayo; uma nje ungenzi izinto eziyihlazo, ungenzi izinto eziyolimaza ukuphila kwabantu; futhi uma nje usaphila ekukhanyeni futhi ungavumi ukonakalisiwa uSathane, khona-ke ubudlelwane bakho noNkulunkulu bulungile.
Ukukholwa kuNkulunkulu kufuna ukuthi uhlele kahle izinhloso zakho nemibono yakho; kumele ube nokuqonda okulungile futhi uwaphathe kahle amazwi kaNkulunkulu nomsebenzi kaNkulunkulu, zonke izimo ezihlelwa uNkulunkulu, umuntu ofakazelwa uNkulunkulu, noNkulunkulu ongokoqobo. Akumele wenze ngokuhambisana nemicabango yakho, noma wenze amacebo akho ayize. Noma ngabe wenzani, kumele ukwazi ukufuna iqiniso, futhi, endaweni yakho njengendalo kaNkulunkulu, uthobele wonke umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ufuna ukulwela ukupheleliswa uNkulunkulu nokungena emgudwini ofanele wokuphila, khona-ke inhliziyo yakho kumele ihlale iphila phambi kukaNkulunkulu. Ungangcoli, ungamlandeli uSathane, ungamniki uSathane noma yimaphi amathuba okwenza umsebenzi wakhe, futhi ungamvumeli uSathane akusebenzise. Kumele uzinikele ngokugcwele kuNkulunkulu futhi wenze uNkulunkulu akubuse.
Ingabe uzimisele ukuba inceku kaSathane? Ingabe uzimisele ukusetshenziswa uSathane? Ingabe uyakholwa kuNkulunkulu futhi uyamfuna ukuze akuphelelise, noma ingabe wenzela ukuba yisiqhathaniso somsebenzi kaNkulunkulu? Ungakuthanda ukuphila okunenjongo otholwa kukho nguNkulunkulu, noma ingabe uzimisele ukuphila impilo engelutho neyize? Ungathanda ukusetshenziswa uNkulunkulu, noma ukusetshenziswa uSathane? Ingabe uzimisele ukuvumela amazwi kaNkulunkulu neqiniso kugcwale kuwe, noma uvumele isono noSathane kugcwale kuwe? Cabanga ngalezi zinto ngokucophelela. Ekuphileni kwakho kwamihla yonke, kumele uqonde ukuthi yimaphi amazwi owashoyo nokuthi yiziphi izinto ozenzayo ezingadala ubudlelwane noNkulunkulu bube nokungajwayeleki, bese uzilungisa ukuze ungene endleleni efanele. Hlola amazwi akho, izenzo zakho, konke ukunyakaza kwakho, nayo yonke imicabango nemibono yakho ngazo zonke izikhathi. Zuza ukuqonda okufanele mayelana nesimo sakho sangempela bese ungena endleleni yomsebenzi kaMoya oNgcwele. Ungaba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu ngale ndlela kuphela. Ngokulinganisa ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile yini, uyokwazi ukulungisa izinhloso zakho, uqonde imvelo nengqikithi yomuntu, bese uziqonda ngempela nawe, futhi, ngokwenza lokhu, uyokwazi ukungena ezimweni ezingokoqobo, uzidele ngobuqotho, futhi uthobe ngokuyinhloso. Ngenkathi uhlangana nalezi zinto ezimayelana nokuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile noma cha, uyothola amathuba okupheleliswa uNkulunkulu, futhi uyokwazi ukuqonda izimo eziningi zomsebenzi kaMoya oNgcwele. Uyokwazi futhi ukubona ngale kwamacebo amaningi kaSathane futhi ukwazi ukungena ubone amatulo akhe. Yile ndlela kuphela eholela ekuphelelisweni uNkulunkulu. Ulungisa ubudlelwane bakho noNkulunkulu ukuze uthobele wonke amalungiselelo kaNkulunkulu, nokuba ungene ngokujulile ezimweni ezingokoqobo, futhi uzuze omunye umsebenzi kaMoya oNgcwele. Lapho wenza ukuba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, izikhathi eziningi, impumelelo iyotholakala ngokushiya inyama nangokubambisana kwakho kwangempela noNkulunkulu. Kufanele uqonde ukuthi “ngaphandle kwenhliziyo enokubambisana, kunzima ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu; uma inyama ingahlushwa, ngeke zibe khona izibusiso ezivela kuNkulunkulu; uma umoya ungalwi, uSathane ngeke ahlazeke.” Uma uzenza futhi uziqonda kahle lezi zimiso, imibono yokukholwa kwakho kuNkulunkulu iyolungiswa. Ekwenzeni kwenu kwamanje, kumele niwushiye umqondo “wokufuna isinkwa sokuqeda indlala,” kumele niwushiye umqondo “wokuthi yonke into yenziwa uMoya oNgcwele, futhi abantu abakwazi ukusiza.” Bonke abantu abakhuluma ngale ndlela bacabanga ukuthi, “Abantu bangenza noma yini abafuna ukuyenza, futhi lapho kufika isikhathi uMoya oNgcwele uzokwenza umsebenzi Wakhe. Abantu abanasidingo sokuthiba inyama noma ukubambisana; okubalulekile ukuthi banyakaziswe uMoya oNgcwele.” Yonke le mibono iwumbhedo. Ngaphansi kwalezi zimo, uMoya oNgcwele akakwazi ukusebenza. Yilolu hlobo lombono oluphenduka isithikamezo esikhulu emsebenzini kaMoya oNgcwele. Ezikhathini eziningi, umsebenzi kaMoya oNgcwele utholakala ngokubambisana kwabantu. Labo abangabambisani futhi abanganqumile, kodwa befisa ukushintsha isimo sabo, nokuthola umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi bathole nokukhanyiselwa kanye nokukhanya okuvela kuNkulunkulu, banemicabango eyihaba impela. Lokhu kubizwa “ngokuzikhohlisa nokuthethelela uSathane.” Abantu abanjena abanabo ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu. Kufanele uthole izambulo eziningi nezibonakaliso zesimo sobusathane kuwe, futhi uthole noma yikuphi ukwenza onakho okushayisana nezimfuno zikaNkulunkulu zamanje. Ingabe uzokwazi ukushiya uSathane manje? Kufanele uthole ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, wenze ngokuhambisana nezinhloso zikaNkulunkulu, ube umuntu omusha onokuphila okusha. Ungabheki emuva eziphambekweni ezidlulile; ungazisoli ngokwedlulele; kufanele ukwazi ukusukuma ubambisane noNkulunkulu, futhi ufeze imisebenzi okufanele uyifeze. Ngale ndlela, ubudlelwane bakho noNkulunkulu buyoba obujwayelekile.
Uma emva kokufunda lokhu, umane uthi uyawamukela la mazwi, kodwa inhliziyo yakho ilokhu ingathintekile, futhi ungafuni ukwenza ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayeleke, kufakazela ukuthi awukuboni ukubaluleka kobudlelwane bakho noNkulunkulu. Kufakazela ukuthi imibono yakho ayikaqondiswa, ukuthi izinhloso zakho azigxilile ekuzuzweni uNkulunkulu nokumnika inkazimulo, kunalokho zilawulwa ukuvumela amacebo kaSathane ukuba anqobe nasekuthini uzuze imigomo yakho. Lolu hlobo lwabantu lunezinhloso kanye nemibono engalungile. Noma ngabe uNkulunkulu uthini futhi akushoyo ukusho kanjani, abantu abanjalo abanandaba futhi abaguquki nakancane. Izinhliziyo zabo azesabi nhlobo futhi abanamahloni. Lolu hlobo lomuntu luyisiwula esingenamoya. Funda wonke amazwi kaNkulunkulu bese uwenza ngokushesha lapho usuwaqonda. Mhlawumbe kwakunezikhathi lapho lapho inyama yakho yayibuthakathaka, wawudlubulundela, noma futhi wawuphikisa khona; kungakhathaleki ukuthi wawuziphatha kanjani, akunandaba, futhi ngeke kuvimbe ukuthi ukuphila kwakho kuvuthwe namuhla. Uma nje usakwazi ukuba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu namuhla, lisekhona ithemba. Uma ngaso sonke isikhathi ofunda ngaso amazwi kaNkulunkulu, kuba noguquko kuwe nabanye abantu bakutshele ukuthi ukuphila kwakho kushintshile kwaba ngcono, kubonisa ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu sebujwayelekile, ukuthi sebulungisiwe. UNkulunkulu akabaphathi abantu ngokweziphambeko zabo. Uma nje usuqonda futhi usubona, uma nje ungayeka ukuhlubuka noma ukuphikisa, khona-ke uNkulunkulu usazoba nomusa kuwe. Lapho unokuqonda nesifiso sokulwela ukupheleliswa uNkulunkulu, khona-ke isimo sakho phambi kukaNkulunkulu siyoba esijwayelekile. Noma yini oyenzayo, cabanga okulandelayo lapho uyenza: UNkulunkulu uzocabangani uma ngenza lokhu? Kuzobasiza yini abafowethu nodadewethu? Kuyoba nenzuzo emsebenzini wendlu kaNkulunkulu? Hlola izinhloso zakho noma kusemthandazweni, ezingxoxweni, ekukhulumeni, emsebenzini, nasekuxhumaneni nabantu, uhlole ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile noma cha. Uma ungakwazi ukuhlukanisa izinhloso nemicabango yakho, kusho ukuthi awukwazi ukuhlukanisa, okufakazela ukuthi kuncane kakhulu okwaziyo ngeqiniso. Uma ukwazi ukuba nokuqonda okucacile ngakho konke uNkulunkulu akwenzayo, ukubona izinto ngeso lezwi likaNkulunkulu, ukuma ngasohlangothini lukaNkulunkulu, khona-ke imibono yakho iyobe isingelungile. Ngakho, ukwakha ubudlelwane obuhle noNkulunkulu kuyinto ebaluleke kakhulu kuwo wonke umuntu okholwa kuNkulunkulu; bonke abantu kufanele bakubheke njengomsebenzi obaluleke kakhulu nanjengesehlakalo esikhulu kakhulu ekuphileni kwabo. Yonke into oyenzayo ilinganiswa ngokuthi unabo yini noma cha ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu. Uma ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile nezinhloso zakho zilungile, yenze. Ukuze ugcine ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, akufanele wesabe ukulahlekelwa yizinto ozithandayo, akufanele uvumele uSathane anqobe, akufanele uvumele uSathane athole into embi kuwe, futhi akufanele uvumele uSathane akwenze inhlekisa. Ukuba nezinhloso ezinjalo kuveza ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile—hhayi ngenxa yenyama, kodwa ngenxa yomoya, yokuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele nokwanelisa intando kaNkulunkulu. Ukuze ungene esimweni esifanele, kufanele wakhe ubudlelwane obuhle noNkulunkulu futhi ulungise imibono yakho ngokukholwa kwakho kuNkulunkulu. Lokhu kwenza ukuthi uNkulunkulu akuzuze, futhi aveze izithelo zamazwi Akhe kuwe futhi akukhanyisele ngisho nakakhulu. Ngale ndlela uyobe usungene endleleni efanele. Qhubeka udle futhi uphuze njalo amazwi kaNkulunkulu anamuhla, ngena endleleni yamanje yokusebenza kukaMoya oNgcwele, yenza ngokuvumelana nezimfuno zamanje zikaNkulunkulu, ungalandeli imikhuba eyisidala, ungabambeleli ezindleleni ezindala zokwenza izinto, futhi ngena ngokushesha endleleni yanamuhla yokusebenza. Ngale ndlela, ubudlelwane bakho noNkulunkulu buyoba obujwayeleke ngokugcwele futhi uyobe usungene emgudwini ofanele wokukholwa kuNkulunkulu.
Okulandelayo：Gxila Kakhulu Kokungokoqobo